Amalungelo wengane umndeni
Umndeni yeseli encane, kodwa esibalulekile emphakathini, eyagcina kwenzeka ngempela isenzakalo esibalulekile, okungukuthi, ukuzalwa komuntu esimthandayo, ingane encane. Naphezu kweqiniso lokuthi ingane eneminyaka engaphansi kwengu-nesishiyagalombili ukusebenza bathembele ngokuphelele ezintweni abazali babo lapho ezalwa ngokuzenzakalelako izuza amalungelo. Ilungelo lokuqala ingane emkhayeni itholakala lokuthi ukuthi kumelwe siphile futhi bafundile, ukuze azi bo zali kungakhathaliseki ukuthi ushadile noma ukuphila ngaphandle, yebo, ngaphandle uma abazali begazi ulwazi alwaziwa.
amalungelo Basic wengane umndeni akukhona nje ukuthi ukunakekelwa kwabazali, lapho bahlangana zonke izidingo zakhe zezinto ezibonakalayo, kodwa futhi uma une isithakazelo esiqotho konke uphathelene ingane nalokho okuhambisana nakho. Kuyinto, okokuqala kunakho konke, ababelethi, uthando, isithakazelo, lapho abazali bayakwazi ukusiza ziphathelene ezihlukahlukene yangaphakathi futhi izingxabano ekuchumana, ukujwayela ukuphila, hlakulela uthando kwabanye, ukuzethemba, kanye ukuvimbela khona nokuthuthukiswa ezingaba ingenayo imicabango engcolile nokungaziphathi kahle. Ukuze ingane kubalulekile ukudala izimo ukuqeda imfundo, kwezokuxhumana nge kokubili umama kanye uPapa, kanye nogogo nomkhulu, odadewethu, abafowethu nazo zonke izihlobo zakhe.
Yini amalungelo owenza ingane? Ekuzalweni kwakhe, kufanele athole igama patronymic, okumele kukhonjisiwe isitifiketi sokuzalwa. Kufanele kuqashelwe ukuthi igama eyabelwe bobabili abazali ngesivumelwano, kuleli cala, inikezwe uyise noma isibongo sikamama ngokujovwa, njengoba kunqunywe ngokuhlanganyela futhi igama lengane, kodwa igama lokuqala inikezwa ngokuvumelana negama likayise. By the way 14 iminyaka ingane yena unelungelo ukushintsha igama lakhe futhi isibongo, bhala amazwi angase ashiwo emagunyeni kunesidingo. Amalungelo wengane umndeni itholakala lokuthi ukuthi, kungakhathaliseki ukuthi ungakanani, akasaboni ukuveza imibono yabo ngokugcwele ngaso sonke isikhathi, ikakhulukazi uma inkinga kuthinta izithakazelo zayo. Futhi, umntwana ungakwazi ukulisebenzisa ngokugcwele ilungelo ubunikazi imali noma yiluphi uhlobo kwempahla ukuthi udluliselwa njengesipho noma ifa, kanye nokusetshenziswa nokulawula yonke impahla abazali lapho uhlala ndawonye.
Ngithanda ukubalula yokuthi ukuvikelwa kwamalungelo ezingane 'ekhaya oda zokuphatha, ukuhlukunyezwa kwamalungelo kwabazali kanye nokuhlukunyezwa kwezingane, eyenziwa ngu abomthetho, kanye neziphathimandla sivikelwe, esitokisini, abashushisi izinkantolo. Isikhathi esining impela, abazali ukhohlwe ukuthi amalungelo engane emkhayeni kubalulekile ukuze amalungelo abantu abadala, ngakho khumbula ukuthi ingane lutho futhi ngeke ngalungi abazali babo, owazalwa noma yini ngempela eyabangela nobunzima ezengeziwe kungafaneleki okulindelekile kanye lokho okulindelwe abazali bazo. Ingane yakho, njengoba ungeyena impahla womuntu, kuba umuntu, umuntu ngamunye futhi ezimele, futhi ephule Isiphelo sakhe, ngoba ucabanga ukuthi kuyoba ilungelo, akekho noma iliphi ilungelo. Abazali ngakolunye uhlangothi, behlola nezifiso, amakhono kanye nokuthambekela okufanele asisize ekuqondiseni ingane ngakwesokudla indlela empilweni. Kufanele uvumelane, ngokuvamile kakhulu empilweni, kukhona amacala lapho ingane siphoqeleka ukuhamba, isibonelo, isikole umculo, futhi ngemva kwesikhashana, thina nje bazonde leli thuluzi futhi ngokungazi uqale ukuyidelela abazali babo, sawacindzetela sikwazi ukubhekana ayinantshisekelo futhi kuyisicefe into ngathi.
Khumbula ukuthi ingane njengoba yimuphi umuntu omdala nabanye isipiliyoni hhayi kungaba njalo lithambe, amnandi futhi ngokuphelele ukufeza izifiso abazali. Kumele kukhunjulwe ukuthi iningi emkhayeni yezingane iphutha abazali ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi bakhe abakuqondanga, esibekwa imibono yabo, wabuza kuye impilo yakhe ukuthi wayengeke akwazi ukubashumayeza, ngamanye amazwi, kwakungafanele futhi ngiye ngafunda ukuba angathathi ke ngakho kuyini ngempela.
Amaswidi Ewusizo izingane
Amazinyo cut: izibonakaliso teething ezinganeni
Ukukhula Ugxumela izinsana: izici, izinkambiso kanye ngeziphambeko
Tank emsakazweni - ithoyizi izingane kanye nabantu abadala
Yikuphi umntwana ozalwa amadevu? I elula impendulo imfumbe
Kungani izingane ngokuvamile uhlanze: uthole izimpendulo
Ingabe kukhona ubungani besifazane?
Indlela yokwenza isifiso sigcwaliseka? amacebo
Bryansk Engineering Plant - Indawo ukuziqhenya esifundeni
Norbekova yokuzijwayeza ngoba umgogodla. Gymnastics Mirzakarim Norbekova ngoba umgogodla nezihlanganiso
Pie ngaphandle amaqanda - Vegetarian
Summer kwasemini: isobho abandayo ne beetroot
Indlela bafunde etafuleni ukubuyabuyelela nengane